Yiyiphi i-Best Optimization ye-SEO kwiiWebhusayithi ze-Jewelry?
Njengoko bethetha, iziqalo zihlala ziphazamisekile. Akunakuphika ukuba ukusekwa kwe-intanethi yoshishino lwezinto zobuncwane kunokuba nzima. Ngethamsanqa, kukho ezinye izicwangciso zokwenza ubuchule obungasebenzisa ukuma phambi kokhuphiswano kwaye uthengise izinto ezininzi zobungcali kwi-intanethi. Skrolela phantsi ukuze ufumane ezi ngcebiso.
I-Ideal Optimization Ideas (I-6)
Gxininisa ekudaleni iNkundla enkulu
Into yokuqala Abasebenzisi abaninzi be-intanethi baqwalasele xa ukutyelela indawo entsha kukuyilo. I-web design esebenzayo ngokuqhelekileyo isisitshixo sokubamba nokugcina ithemba lakho - offerte umzug. Ngoko ke, xa usungula indawo yezobucwebe, qinisekisa ukuba ubuchule bakho bukhangeleka kubasebenzisi bobabini kunye neenjini zokukhangela. Qala ngekhasi lakho lasekhaya. Khumbula, ukuba unokufumana iindwendwe ezidlulileyo kwiphepha lokuqala, zihlala phezu kwayo, ngoko uhlala khona. Yenza ukufezekiswa kwezi zinto ezifana nombala wemibala, imifanekiso, imifanekiso, iimpawu, iimpawu, ukuyilo lonke iphepha. Gxininisa ekuveliseni iimpembelelo ezinamandla kwiindwendwe zakho. Ukulandela isicwangciso esinjalo kuyimfuneko ekuphuculeni ingeniso yakho.
Thatha iifayile zeMpawu
Wonke umntu uyayithanda imifanekiso. Iifoto eziphezulu zezinto zakho zobungcweti yingxenye ebalulekileyo ye-website ephumelelayo ye-SEO. Kucacile ukuba ukuba iifoto zakho zinobuhle obuhle, kunethuba elingaphantsi lokuba abantu bafuna ukuzithenga. Qinisekisa ukuba imifanekiso yakho igxile kwaye ingabonakali kakhulu. Kucetyiswa ukuba uqeshe umfanekiso wezentengiselwano osebenza ngokukhethekileyo ekusebenzeni kwendawo okanye ekude kunye namashishini amancinci.
Umgaqo-siseko wokuthengisa nge-intanethi ukunika abasebenzisi ukhetho. Ezi zibandakanya ububanzi beetambo, ukumkani weensimbi zobunono, umbala wexabiso, iintlobo zokubeka kunye nomgca. Cinga ukuba umntu ufuna isipho esithile esixutywe okanye sithunyelwe kwidilesi echaziweyo. Ngokubonelela abathengi ngeendlela zokukhetha, awuyikuphucula kuphela amava abo okuthenga kodwa uphinde uphucule ukuthengisa kwakho.
Iinkcukacha zokwabelana ngeNtlalo
Ukwabelana ngoluntu ludlala indima ebalulekileyo malunga naluphina uhlobo lwezoshishino. Ngaloo ndlela, kucetyiswa ukuba usebenzise umgangatho wokwabelana ngemidiya yoluntu kwishishini lakho lobucwebe. Bonke abo babelane ngamaqhosha banokukunceda ukukhuthaza bobabini: i-brand yakho kunye newebhusayithi yakho yezobucwebe. Isabelo ngasinye sinokuthathwa njengesikhangiso samahhala sezinto zakho kunye neengcebiso ezivela kubathengi kubahlobo babo kwi-intanethi yezonxibelelwano. Njengoko unokwazi, izabelo zikhokelela ekuthengiseni.
Izandi ezingaqhelekanga kodwa ukuba udala okanye uthengise ubucwebe kwi-intanethi, kufuneka uzigqoke ngaphandle kwendlu. Ukukhangisa kwamahhala okuya kukunceda ukukhangela abaxhasi. Ingaba kukho iziganeko, iifriji, ukusebenza okanye ukugqoka kwansuku zonke, faka iingubo zakho. Yindlela ekhawulezayo nelula yokubhengeza ubucwebe bakho kubahlobo, osebenza nabo kunye nosapho, kunye nabo bantu odibana nabo kwisitalato. Unokuze uhambe inyathelo elongezelelweyo uze ucele abanye bakho ukuba banxibe izinto ezidaliweyo.
Lawa awona macebiso angcono kakhulu kwi-SEO ongayifaka isicelo sokwenza i-website yakho yezinto zokugqoka iphakamileyo. Ithemba, ufumana ukuba luncedo.